ကိုဗစ်ကုသရေးမှာ အပြောင်းအလဲဖြစ်စေမယ့် သောက်ဆေးတွေရှိလာပြီ | Duwun
ကူးစက်ခံရပါက အလွယ်တကူ သောက်နိုင်တဲ့ သောက်ဆေးနှစ်မျိုးရဲ့ ထိရောက်မှုကို သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီတွေက ကြေညာလိုက်ပါတယ်
တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ဂယက်ရိုက်မှုကြီးမားခဲ့တဲ့ ကပ်ရောဂါ ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှု ၂ နှစ်နီးပါးရှိလာချိန်မှာ ကာကွယ်ဆေးတွေ အသုံးပြုနိုင်နေပြီဖြစ်သလို COVID-19 နဲ့အတူ ယှဥ်တွဲနေထိုင်ရေးမှာ အရေးပါလှတဲ့ ကုသဆေးတွေလည်း စတင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ပညာရှင်တွေနဲ့ ဆေးဝါးကုမ္ပဏီတွေက ထိရောက်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ကုသဆေး ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် အပတ်တကုတ် ကြိုးပမ်းနေခဲ့ကြပြီး ထိုဆေးတွေက ကမ္ဘာကြီးအတွက် အလွန်အရေးပါလှပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာ ကာကွယ်ဆေးတွေ ထိုးနေကြပြီဖြစ်သည့်တိုင် COVID-19 ကပ်ရောဂါအန္တရာယ်က ကြီးကြီးမားမားရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအခါမှာတော့ ကာကွယ်ဆေးအပြင် ကူးစက်ခံရပါက အလွယ်တကူ သောက်နိုင်တဲ့ သောက်ဆေးနှစ်မျိုးရဲ့ ထိရောက်မှုကို သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီတွေက ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီကြီတွေဖြစ်တဲ့ Merck နဲ့ Pfizer တို့က ၎င်းတို့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ COIVD-19 ကုသရန်အတွက် သောက်ဆေးတွေရဲ့ စမ်းသပ်မှုအခြေအနေကို အသီးသီး ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ COVID-19 ကို ရင်ဆိုင်ရာမှာ အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်ပြီး ထိရောက်တဲ့ကုသမှုပေးနိုင်တဲ့ သောက်ဆေးတွေကို အပြောင်းအလဲကြီး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
COVID-19 ရောဂါလက္ခဏာ ပထမဆုံး ဖြစ်ပေါ်လာချိန်မှာ တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး သောက်ရတဲ့ ဆေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဗိုင်းရပ်စ်သတ် သောက်ဆေးတွေက COVID-19 ပြင်းထန်ပြီး ဆေးရုံတက်ရတဲ့ အခြေအနေမဖြစ်စေရန် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ယခုကဲသို့ ကုထုံးပုံစံကို ကပ်ရောဂါ စတင်ဖြစ်ပွားပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်း ကြုံလာရချိန်ကတည်းက ရှာဖွေကြံဆနေခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လနဲ့ချီကြာ သုတေသနပြုခဲ့ပြီးနောကန် Merck နဲ့ Pfizer ဆေးဝါးကုမ္ပဏီတွေက ထိရောက်တဲ့ ကုသဆေးကို ဖော်စပ်ရရှိပြီလို့ ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ Merck ကုမ္ပဏီထုတ် Molnupiravir အမည်ရှိ ဗိုင်းရပ်စ်သတ် သောက်ဆေးကို အမေရိကန်မှာ FDA တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရရန် ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အတူ Pfizer က အသစ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်သတ် သောက်ဆေးနဲ့ ritonavir အမည်ရှိ ယခင်ရှိပြီးသား ဗိုင်းရပ်စ်သတ် သောက်ဆေးတို့ကို ပေါင်စပ်သောက်ရတဲ့ Paxlovid ခေါ် ကုထုံးဆေးကိုလည်း အမေရိကန် FDA ခွင့်ပြုချက်ရရန် ဆောင်ရွက်နေပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ Merck နဲ့ Pfizer တို့က ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်သတ် သောက်ဆေးနှစ်မျိုးလုံးဟာ COVID-19 ဖြစ်စေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (SAR-CoV-2) ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ပွားများနိုင်စွမ်းကို လျှော့ချပေးပြီး ရောဂါဖြစ်မှု နှေးကွေးစေပါတယ်။
စမ်းသပ်မှုရလဒ်တွေအရ ထိုဆေးတွေဟာ ‌COVID-19 ကြောင့် ဆေးရုံတက်ရမှုကိုလည်း ကောင်းစွာလျှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံးက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Molnupiravir သောက်ဆေးက ဆေးရုံတက်ရမှု သို့မဟုတ် သေဆုံးနိုင်မှုကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ Paxlovid က ၈၉ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချပေးနိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ထိုဆေးနှစ်မျိုးအပြင် စိတ်ကျရောဂါအတွက် သောက်ရတဲ့ ယခင်ကတည်းကရှိပြီးသား Fluvoxamine အမည်ရှိ သောက်ဆေးကလည်း COVID-19 ရောဂါပြင်းထန်မှုကနေ ကာကွယ်ပေးကြောင်း ကျေနပ်အားရစရာ စမ်းသပ်မှုရလဒ်တွေရှိခဲ့ကြောင်း ဘရာဇီးသုတေသီတွေက Lancet Global Health ဂျာနယ်မှာ အောက်တိုဘာလအတွင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီဆေးတွေက ဘာလို့ အရေးကြီးတာလဲ?
အကယ်၍ ထိုသောက်ဆေးတွေရဲ့ ထိရောက်မှုကို အတည်ပြုခဲ့ပါက COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးမှာ ကြီမားတဲ့ ခြေလှမ်းတစ်ရပ် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ကုသဆေးတွေက ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့အတူ ကမ္ဘာက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ရင်ဆိုင်ရာမှာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ ကုထုံးတွေမှာတော့ ယခင်ရှိပြီးသား ပဋိဇီဝဆေးတွေကို အားကိုးနေရပါတယ်။
(Photo: Paul Sancya / AP)
များသောအားဖြင့် လက်ရှိကုထုံးတွေဟာ ထိုးဆေးများ ထိုးပေးရတာကြောင့် ကုသရေးမှာ ပိုမိုခက်ခဲပါတယ်။ COVID-19 ကုသရန် သောက်ဆေးတွေရှိလာပါက လူနာအနေနဲ့ နေအိမ်မှာပင် အလွယ်တကူသောက်နိုင်ပြီး ရောဂါကုသနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Merck နဲ့ Pfizer တို့က ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ သောက်ဆေးတွေဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာမရှိဘဲ ငါးရက်အတွင်း ၁၀ ကြိမ်ခန့် သောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။
Merck နဲ့ Pfizer တို့က ၎င်းတို့ရဲ့သောက်ဆေးများ စမ်းသပ်မှုအချက်အလက်တွေကို အသေးစိတ် ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးရာ ထိုဆေးတွေကို အကဲဖြတ်ရန် ခက်ခဲနေပါသေးတယ်။ ကုသဆေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယခုလိုပုံစံ ကြေညာမှုတွေအပေါ် လေ့လာတွေ့ရှိမှုတွေကို စိစစ်နိုင်တဲ့အထိ သတိထားသင့်ကြောင်း ပြင်သစ် ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ Karine Lacombe က စက်တင်ဘာလအတွင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ ဆေးတွေရမလဲ? ဆေးနှုန်းက ဘယ်လောက်လဲ?
Merck က ထုတ်လုပ်တဲ့ Molnupiravir သောက်ဆေးကို ဗြိတိန်မှာ တရားဝင် ခွင့်ပြုချက်ပေးထားပါတယ်။ ဗြိတိန်မှာ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ အဝလွန်သူများ သို့မဟုတ် ဆီးချိုရောဂါအခံရှိသူများကဲ့သို့ COVID-19 ပြင်းထန်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိသူတွေကို Molnupiravir သောက်ဆေးဖြင့် ကုသပေးနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂ ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကလည်း ထိုသောက်ဆေးကို အရေးတကြီး သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ နိုင်ငံအချို့ကတော့ Molnupiravir သောက်ဆေးတွေကို ကြိုတင်မှာကြားထားကြပါတယ်။ Molnupiravir သောက်ဆေး ၅ ရက်စာအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၀၀ ကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။ Pfizer ကတော့ ၎င်းရဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်သတ်ဆေး နှစ်မျိုးပေါင်းစပ်ကုထုံး Paxlovid အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပေမဲ့ လက်ခံနိုင်တဲ့ ဈေးနှုန်းဖြစ်မယ်လို့ ကတိပြုထားပါတယ်။